चीनसंगका सम्झौताकाे कार्यान्वयनमा किन ढिलाई ? यस्तो छ कारण – Himalaya TV
Home » समाचार » चीनसंगका सम्झौताकाे कार्यान्वयनमा किन ढिलाई ? यस्तो छ कारण
चीनसंगका सम्झौताकाे कार्यान्वयनमा किन ढिलाई ? यस्तो छ कारण
३ बैशाख २०७५, सोमबार ०८:३८
काठमाण्डौ ३ बैशाख । उत्तरी छिमेकी चीनले दुईदेशीय रेलमार्ग निर्माणसहित अन्य आर्थिक सहकार्य प्रस्ताव गरेको धेरै समय भए पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । विगतमा भएका थुप्रै सम्झौता र समझदारी अलपत्र छन् । यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सोमबार चीन भ्रमणमा निस्कँदै छन् ।
कतिपय ठूला परियोजना र दीर्घकालीन असर गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनका आधार तय गर्ने काम भइरहेको र त्यसमा राजनीतिक स्पष्टता पनि आवश्यक रहेकाले ज्ञवाली त्यसतर्फ जान लागेको परराष्ट्र उच्च अधिकारीले जनाए । ‘दुई देशबीचका संयन्त्रको बैठक निरन्तर बस्दा सबै विषय टुंगो लाग्दै जानेछ । सडक र रेलमार्ग बन्न भने अलिक समय लाग्नेछ । यो तत्काल नै हुने काम होइन,’ अधिकारीहरूले भने ।
नेपाल–चीन आर्थिक सहयोग, पारवहन, लगानी, व्यापार र दुई देशबीच सतह र हवाई मार्गबाट सम्पर्क विस्तारबारे कर्मचारीस्तरमा लगातार परामर्श भइरहेको दाबी परराष्ट्र अधिकारीको छ । तर, देखिने खालको उपलब्धि हुन नसकेको विषयमा मन्त्री ज्ञवालीले सोमबार चीन जानुअघि मन्त्रालयमा धारणा राख्ने बताइएको छ । यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।